Nahoana No Lasa Olana Ho an’ny Indiana i Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2017 4:15 GMT
Sora-baventy manohitra ny fanafihan'ny mpankahala vahiny ao Etazonia. Sary tao amin'ny Flickr, Roscoe Myrick (www.shotboxer.com). CC BY 2.0
Toa tsy ho an'ireo Indiana maro ao Etazonia intsony ny fitoviana sy ny nofy Amerikana, hatramin'ny niasan'ny filoha Donald Trump. Nampiahiahy olona marobe manerantany ny volana maromaro lasa, ary taitra manokana ny Indiana raha nahafantatra ny namonoana injeniera Indiana iray antsoina hoe Srinivas Kuchibhotla noho ny antony voalaza fa fanavakavaham-bolokoditra. Mandritra izany, manohy mametraka ny “fandraràna Miozolomana” mampiadihevitra, miady amin'ny rafi-pitsarana Amerikana, ny Trano Fotsy
Vokatr'izany, miha betsaka ireo olona ao India voalaza fa nanomboka nanoro hevitra ny naman'izy ireo sy ny fianakavian'izy ireo mba tsy hitsidika an'i Etazonia, na noho ny asa na noho ny fianarana.
Maty voatifitra tao amin'ny toeram-pisotroana iray ao Kansas i Kuchibhotla tamin'ny volana Febroary, ary nanaraka izany ny fanafihana Indiana hafa izay nantsoin'ny tranonkala Socialistworker.org fa “andiana herisetra mihatra amin'ireo Aziatiaka Atsimo.”
Nilaza ireo mpitsikera an'i Trump fa anisan'ny tompon'andraikitra tamin'ny fitomboan'ny vondrona mpankahala mikendry ny Amerikana Latina, Miozolomana, Amerikana Afrikanina, sy ny fiarahamonina LGBT ny kabarin'i Trump.
Tamin'ny 28 Febroary, namoaka taratasy mampihetsi-po momba ny fahafatesan'ny vadiny tao amin'ny Facebook ny vady navelan'i i Kuchibhotla, nilaza ny fikasany hijanona ao Etazonia sy hanohy ny nofinofin'ny vadiny:
Nanorina ny trano nofinofinay izahay, izay nolokoiny, ary nametraka ny varavaran'ny garazy izy. Nanome fifaliana lehibe ho azy ny fanaovana karazan-draharaha tao an-tranony. Izany no trano naoriny […] ho anay sy ny zanaka tianay hananana. [Izany] no dingana voalohany nanombohanay [amin'ny fananganana] ny fianakaviana. Tena mampalahelo fa rava izany nofinay izany ankehitriny
Nandritra ny volana Febroary sy Martsa, namaly ny hafatr'i Dumala sy ny famonoana ny vadiny ireo mpisera Twitter Indiana maromaro
Ny sasany kosa nitady fepetra henjana mba hanavotana ireo Indiana amin'ny governemanta:
— ?????? ????? (@KanchanGupta) March 6, 2017
Tokony hirotsaka an-tsehatra an-tery tanteraka ho an'ireo Indiana roa manana pasipaoro Indiana i India ary mamela an'i Etazonia hifampiraharaha momba ny manjò an'ireo Amerikana roa hafa.
Ny hafa indray nihaika tamin'esoeso amin'ny fampitandremana ireo avy ao Etazonia ho any India
Tsy tokony ho zavatra hafa ve ity torohevitra momba ny dian'ny mpitsidika avy ao Etazonia ho ao India ity?
Fotoana hitsanganana manoloana ny fanafihana Ara-poko mihatra amin'ireo Indiana ao Etazonia. Tsy mety mahatakatra, nahoana ny Indiana no tafihana amin'ny anarany!!
Tafihana sy vonoina ho faty ao Etazonia ny Indiana. Tsy mahita fepetra avy amin'ny governemanta na fanoherana avy amin'ny antoko politika hafa. Etazonia ve no antony?
Nandanjalanja amin'ny tsy fihetsehan'i India manoloana ireo fanafihana kosa ny manam-pahaizana sasany:
Raha voatafika ny Indiana manana pasipaoro Amerikana, manan-jo hiahiahy amin'ny heloka maka tahaka mitovy amin'izany mihatra amin'ireo olom-pireneny manokana ao Etazonia ny governemanta Indiana 2/n
Mpanao gazety Indiana malaza, Barkha Dutt nanasongadina ity fironam-baovao ity:
Manantena fa mahita ity tontolo ara-politika Amerikana mandrisika heloka bevava noho ny fankahalana antsika ity ankehitriny ireo Indiana nihevitra fa “tsara ho antsika” i Trump.
Niahiahy tsotra izao ireo Indiana maro:
Hadalàna, efa nisy nanafika ara-poko tao Etazonia nandritra ireo governemanta isan-karazany ny Indiana. Efa nisy polisy Amerikana nidaroka raibe Indiana taona vitsy lasa izay.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fiainan'ireo Indiana ao amin'i Amerikanan'i Donald Trump, dia niresaka tamin'ny tanora Indiana roa mikasika ny fikasan'izy ireo tsy tanteraka hianatra any Etazonia ny Global Voices
Nimanniyu Sharma, mpisolovava
Global Voices: Inona no ataonao ary inona no nianaranao?
Nimanniyu Sharma (NS): Mpisolovava amin'ny Famahàna Fifandirana [ady], sampana lalànan'ny orinasa ao New Delhi aho. Nahazo diplaoma tamin'ny Oniversite Fianarana Lalàna, Oniversite Panjab, Chandigarh aho.
Global Voices: Taiza no nirianao hianarana ao Etazonia?
NS: Nikendry ireo oniversite isan-karazany aho mba hanohy ny LL.M. [taranja lalàna] ao Etazonia. Tao Avaratra Andrefana, tao amin'ny UPenn, tao amin'ny NYU, tao amin'ny Columbia, sns. ny sasany tamin'ireo safidiko voalohany.
Ny antony nanohizana ny fianarana tany dia i Etazonia no firenena tia mandray olona indrindra tamin'izany, indrindra tao amin'ny tontolon'asako, eo amin'ny resaka fahazoana asa sy ny fidirana amin'ny akademia. Raha oharina amin'ny tsena hafa, dia manana fihariana matevina izy izay nampitombo ny isan'ny fifanakalozana arak'asa ary mora iavota-tena ny firenena noho ny firoboroboan'ny fihariana. Tao anatin'ny taona vitsy, fantatra tamin'ny fahaizany mandray mpifindra-monina ihany koa izy, izay indrisy fa tsy izany intsony ankehitriny.
Global Voices: Inona no tsy handehananao intsony any Etazonia?
NS: Nanimba tanteraka ny fikasako hanohy fianarana sy hitady asa ao Etazonia ny raharaham-panjakana vao haingana tao Etazonia. Na dia tanàna liam-pandrosoana tanteraka izay tsy dia nisy fiantraikan-javatra ratsy aza hatramin'izao ny toerana ara-jeografikan'ny oniversite nosafidiako, dia mbola mihevitra loatra aho fa fanombohan'ny fitsontsorika eo ambany fitarihan'ny mpitantana an'i Etazonia amin'izao fotoana izao izany. Tsy hanao sorona ny aiko ho voatifitra ao anaty fahombiazan'asa aho.
Global Voices: Ahoana ny hevitrao tamin'ny fanafihana an'ireo Indiana vao haingana tao Etazonia?
NS: Nalahelo tanteraka aho, saingy ny loza akaiky ahy, izay tena nampatahotra ahy kokoa dia ny iray tamin'ireo nitranga tamin'ny anabaviko iray zanaky ny iray tampo amin'ny ray aman-dreniko.
Andro vitsy monja taorian'ny nandraisan'i Trump ny asany, raha niandry ny fahatongavan'ny namana (fotsy hoditra) tao amin'ny toeram-pisotroana toaka ao Philadelphia ity anabaviko ity, dia nataon'ny mpiasan'ny toeram-pisotroana izay nahatsapan'ny anabaviko fa manelingelina izy tao amin'ilay toerana. Tsy nety nandray azy izy na dia teo aza ireo fampahatsiahivina marobe sy fangatahana avy aminy. Raha vao tonga ny namany (fotsy hoditra), nanome seza hafa ho azy tao amin'ny toeram-pisotroana ilay mpiasan'ny bar raha toa izy te hipetraka mihataka amin'ny “matroka”, tsy mahafantatra ity mpiasa ity fa naman'ilay anabaviko izy. Tsy nieritreritra velively aho fa hitranga amin'ny olona fantatro sy akaiky ahy izany. Nampihevitra ahy tampoka izany fa “zavamisy” ity olana ity. Taorian'izany, nanamafy ny fanapahan-kevitro tsy hankao Etazonia intsony ny fanafihana am-bava sy ara-batana hafa nihatra tamin'ireo Indiana ao Etazonia.
Mivavaka ho an'ny namako [mpiray tanindrazana] monina ao amin'izany firenena izany aho — ho an'ny filaminan'izy ireo sy ny firaisankina.
Inona no safidy hafa savasavainao ankehitriny?
(NS): Tsy i Etazonia ihany no toerana “tokana” nokasaiko hanohizana ny fianarana, Nataoko loha-laharana ankehitriny ny sekolin'ny lalàna Eoropeana, Kanadiana ary Aziatika.
Shadab Nazmi, mpanao gazety multimedia
Shadab Nazmi. Sary tao amin'ny Twitter
Global Voices: Nanao ahoana ny zava-niainanao voalohany tao Etazonia?
Shadab Nazmi (SN): Tamin'izaho 16 taona no nitsidika voalohany an'i Etazonia. Nahafinaritra izany, tia namana ny olona, ary vonona foana [izy ireo] hanampy raha ilaina. Saingy efa tamin'ny 2007 izany ary nonina tamin'ny tanàna tena kely antsoina hoe Westport ao Indiana aho.
Global Voices: Inona no nitranga nandritra ny antsafa hahazoana visa?
SN: Nilamina ny antsafa voalohany raha namonjy ny fandaharana nahazoana vatsim-pianarana taona 2007 avy amin'ny Sampam-panjakana Amerikana aho. Nomena visa ho an'ny mpitsidika nifanakalozana J1 avy hatrany aho taorian'ny fanontaniana vitsivitsy tahaka ny hoe hafiriana no hijanonako ao? Aiza aho no hipetraka? Iza no miantoka ny diako? Saingy tamin'ny taona 2011, raha nanapa-kevitra hitsidika ny fianakaviana nampiantrano ahy aho, nolavina indroa ny visa-ko. Nolazaina tamiko fa mahita ahy ho mety ho mpifindra-monina ny [manampahefana Amerikana], ary tsy dia manana fifandraisana ara-tsosialy ao [India] aho, izay entina manaporofo ny fitiavako hiverina.
Global Voices: Mbola ho any Etazonia ihany ve ianao?
SN: Eny indrindra. Manana visa B1/B2 aho izay manankery hatramin'ny taona 2022. Somary matahotra aho rehefa mieritreritra ny fanamarinana fifindra-monina isaky ny mankao Etazonia — na izany ao Chicago, na Newark, na Dulles — Voatazona hatrany aho ary ametrahan'ireo polisy telo samihafa fanontaniana momba ny tanjon'ny diako.
Global Voices: Ahoana ny hevitrao amin'ny lahateny mankahala vahiny sy ny kabary mamely ny Miozolomana sy ny fiarahamonina LGBT ataon'ireo mpanohana marobe an'i Trump?
SN: Nanomboka nirongatra ny fankahalana vahiny sy ny fanavakavaham-bolokoditra talohan'ny naha-voafidy an'i Trump. Manana namana roa niezaka nanohy ny fianarany PhDs tao Princeton aho, saingy nifindra tao amin'ny Oniversite Osaka ao Japana ankehitriny. […] Ary niahiahy fatratra taorian'ny fitifirana tao Kansas ny ray aman-drenin'izy ireo.
Global Voices: Te hanome torohevitra ho an'ireo hafa hitsidika an'i Etazonia ankehitriny ve ianao?
SN: Raha handeha hitsidika mandritra ny andro vitsy monja ianao. Miaraka amin'ny visa F1, afaka mianatra tanteraka amin'ny oniversite, saingy misy ny herijika lehibe fa mety tsy hahazo H1-B ianao, satria tsy te handoa vola mihoatra ny 35.000 dolara isan-taona amin'ny ambaratongan'asa ny mpampiasa Amerikana.
Global Voices: Niatrika fanavakavaham-bolokoditra ve ianao tamin'ny dianao farany tany Etazonia?
SN: Matetika aho vazivaziana hoe “Misaotra, tongava indray amin'ny manaraka,” manondro ny toetran'ny Indiana “Appu” ao amin'ny [fandaharana fahitalavitra] Simpsons. Saingy indroa izay, tao amin'ny sekoly ambony, nantsoina hoe “7-11” [ilazana ireo magazay misokatra mandavataona, tantanin'ireo Indiana am-pielezana marobe ao Etazonia.] aho fa tsy tamin'ny anarako
Satria mikasa hampihena ny visa H-1B i Etazonia ary hanavao ny fitantanana visa i Aostralia, Aziatika marobe, tahaka ny Shinoa sy Indiana no hahita fa ho sarotra ny hifindra toerana any amin'ny firenena anjakan'ny fahafaha-mihary ara-toekarena, izay manasarotra ny fironana ao anaty fanantontoloana izay namolavola ireo andian-taranaka faramparany.